Sharing Superheroes - J.Boye Philad... by Michael Fienen 1029 views
Search Engine Web Marketing Simple ... by jaxky 618 views
Naloxonforløb expanded by Henrik Thiesen 144 views
Ians Slides by Mary Rose 387 views
Twitter lesson by Jasmine Elnadeem 325 views
1. ဘဘဘဘဘဘဘ (ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ) ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ (ဘဘဘဘဘဘဘဘ) ဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ (ဘဘဘဘဘဘဘဘ) ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “ ဘဘဘဘဘဘဘ.. ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ” “ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ(Rama 2)ဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “ “ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ..ဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “ “ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ..ဘ “ “ ဘဘဘဘဘဘ…ဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘ” ဘဘဘဘ.. ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘ.. ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ(Rama 2) ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ(Rama 2) ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “ ဘဘဘဘဘဘဘ… ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ“ “ ဘဘဘ “ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “ ဘဘဘဘဘဘ… ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “ “ ဘဘ.. “ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ..ဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘ ဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ Express Way ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘ… ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ(Central Rama 2) ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ..ဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ‘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “ “ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ … ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘ ဘဘဘဘ ဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ “
2. ‘ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ. မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ..မ မမ.. မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ “ “ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ(မမမမမ) မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ (မမမမမမမမမမမမမမမ)မ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမ မမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမ.. မမမမမမမမမ.. မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ “ “ မမမမ.. မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ” မမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမ မမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမ မမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမ မမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ “ “ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ “ “ မမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ” မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ
3. “ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ “ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ“ “ မမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ “ “ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ ‘ “ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ “ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမ မ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမ မမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမ မမမမ… မမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမ မမမမမမမ မ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမ..မ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမ…မ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ…..မ (မမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ မမမမမမမမမမမမမ)